Tranonkala famolavolana tranokala 2016 hodinihina alohan'ny hamoronana ny tranokalanao | Martech Zone
Nahita orinasa marobe nifindra nankany amin'ny traikefa madio sy tsotra kokoa ho an'ireo mpampiasa tranokala izahay. Na mpamorona ianao, mpamorona, na tranonkala tianao fotsiny dia azonao atao ny mianatra zavatra iray amin'ny fijerena ny fomba fanaovan'izy ireo izany. Miomàna hahazo aingam-panahy!
Ny fialana ao ambadiky ny andro voalohan'ny andro amin'ny Internet, izay feno fakantsary gifs, bara mihetsiketsika, bokotra, sary masina ary dihy mandihiza, ny sary mihetsika ankehitriny dia midika famoronana hetsika mifandraika sy mamaly izay manatsara ny fitantarana ary manome traikefa be mpampiasa.
Ny ohatra amin'ny sarimiaina manankarena dia ny fampidirana sary mihetsika, fizarana ary menus, sarimiaina, sarimihetsika ary sary mihetsika, sary mihetsika, horonan-tsary ary sary mihetsika am-boalohany. Zahao ity tranonkala ity avy any Beagle, sehatra fitantanana tolo-kevitra:
Ny sarimiaina manan-karena dia azo jerena koa amin'ny fifandraisana bitika. Ohatra, ao amin'ny LinkedIn, ny mpampiasa dia afaka manodinkodina eo ambonin'ny karatra iray ho an'ny menio safidy tsy mitombina ary avy eo misafidy ny hitsipaka ilay tantara na hanao hetsika hafa.
Nipoitra indray ny sarimiaina GIF (tamim-pifaliana?), Ary azo ampiasaina amin'ny tanjona maro samihafa, ao anatin'izany ny hatsikana, fampisehoana ary na dia ho haingon-trano fotsiny aza.
Material Design, fiteny famolavolana Google novolavolaina, miankina amin'ny singa amin'ny endrika-pirinty — typography, grids, space, scale, loko, ary ny fampiasana sary — miaraka amin'ny sary mihetsika sy fiovana, padding ary ny valiny lalina toy ny jiro sy aloka mankany manomeza traikefa momba ny zava-misy, mahasarika ary mifandray.
Mampiasa aloka, fivezivezena ary halaliny ny Material Design mba hanolorana hatsarana maoderina madio sy mifantoka amin'ny fanatsarana ny UX tsy misy lakolosy sy kiririoka be loatra.
Ny ohatra hafa amin'ny famolavolana fitaovana dia misy sary an-tsisiny, typografika lehibe, ary toerana fotsy iniana.
Na dia manolotra fomba fiasa iray momba ny minimalism aza ny Material Design, ny endrika fisaka kosa dia mijanona ho safidy mahazatra ho an'ireo tia andalana madio. Izany hoe, ny famolavolana fisaka dia matetika no jerena amin'ny endrika nomerika azo antoka, tena misy ary ahazoana aina.
Miorina amin'ny fitsipiky ny habaka fotsy, ny sisiny voafaritra, ny loko marevaka ary ny sary 2D — na ny “fisaka”, ny endrika fisaka dia manolotra fomba marobe izay matetika mampiasa teknika toy ny sary haingon-tsipika sy aloka lava.
Ampiasaina tsara indrindra rehefa manana faritra roa mitovy lanja hampiroboroboana ianao, na te hanolotra atiny miaraka amin'ny sary na haino aman-jery ianao, ny efijery fisarahana dia fomba vaovao vaovao hanomezana traikefa nahafinaritra sy feno fahasahiam-batana ho an'ny mpampiasa.
Amin'ny alàlan'ny famelana ny mpampiasa hisafidy ny atiny sy ny zavatra niainany dia afaka mamorona traikefa amin'ny karazana vavahady ianao izay mitaona ny mpitsidika hiditra.
Milatsaka ny Chrome
Raha ampidirina amin'ireo mpamono Chrome sy ny haingon-trano amin'ny fiara mahazatra, ny "chrome" dia manondro kaontenera iray an'ny tranonkala — ny menus, ny lohateny, ny footers ary ny sisin-tany izay mamehy ny atiny fototra.
Mety hanelingelina izany, ary orinasa maro no misafidy ny hanafaka ireo kaontenera ary hamorona lamina madio sy madio tsy misy sisin-tany, lohateny na zoro.
Adinoy ny aforitra
"Any ambonin'ny vala" dia misy jargon-gazety ho an'ny antsasaky ny pejy voalohan'ny gazety. Satria matetika mivalona ny gazety ary apetraka ao anaty boaty sy aseho, ny atiny mahasarika indrindra dia mihoatra ny vala mba hanomezana azy ireo ny fotoana mety hisamborana mpamaky (sy ny poketrany) mety hitranga.
Ny famolavolana tranokala dia efa nampiasa ny hevitry ny famoronan-kevitra tamin'ny fitsipika fa mavesatra ny fikorisana. Saingy vao tsy ela akory izay, ny sary sy ny atiny amin'ny efijery feno dia miarahaba mpampiasa iray ary mamporisika ny fikororohana hamoaka votoaty fanampiny sy lalina kokoa.
Ny video dia mety ho fomba mahasarika hisarihana ny sain'ny mpitsidika, ary matetika izy io dia mandaitra kokoa noho ny sary na lahatsoratra. Ny horonan-tsarimihetsika looping toa ireo izay ampiasain'ny Apple ho an'ny Apple Watch dia fomba tokana hametrahana feo sy hisintonana ireo mpitsidika.
Tsindrio raha hijery DK New MediaNy horonantsarin'izy ireo ao amin'ny pejy fandraisana
Raha momba ny famolavolana tranonkala, singa marobe manokana no hibaiko ny indostria, ny akany, ny tsena kendrenao ary ny atiny. Hiankina amin'ny valintenin'ireo mpitsidika sy izay misy dikany indrindra amin'ny hafatrao ny filaharanao. Saingy miaraka amina fironana ireo dia hanana izay rehetra ilainao ianao hamoronana tranokala manery izay manao izay ilainao atao, ary izany dia mampiseho fa hainao ny manaraka ny fotoana.
Pamela Webber dia Lehiben'ny Marketing ao amin'ny 99designs, tsena famolavolana sary an-tserasera lehibe indrindra eto an-tany. Ao amin'ny 99designs, Pamela dia mitarika ny ekipa mpivarotra manerantany tompon'andraikitra amin'ny fitantanana fahazoana mpanjifa sy fampitomboana ny sandan'ny mpanjifa mandritra ny androm-piainany. Ho fanampin'ny zavatra niainany amin'ny maha-mpivarotra azy, Pamela dia mitondra traikefa voalohany amin'ny maha mpandraharaha ecommerce azy ary miasa miaraka amin'ireo fanombohana mitombo haingana.
Fanontaniana 6 hanontanianao tena alohan'ny hanombohanao ny famolavolana tranokalao
Fomba 4 izay manome valiny ireo fampiharana data be